काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए १०३८ जना संक्रमित : RajdhaniDaily.com -
काेराेना नियन्त्रणका लागि सहकार्यका साथ अघि बढन युवा संघकाे अपिल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकटको युवा संघ नेपालले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि हातेमालो गर्दै सहकार्यका साथ अगाडी बढन युवाहरुमा...
९ महिना देखि थन्किएको भेन्टिलेटर सञ्चालन
ईश्वर तामाङ - May 15, 2021 0
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको समन्वयमा जिल्ला अस्पताल गाईघाटमा जडान गरिएको भेन्टिलेटर सञ्चलान गरिने भएको छ । जनशक्ति अभाबमा ९ महिना अघि जडान गरे...
दोलखामा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने निर्णय
दीपशंकर चौलागाई - May 15, 2021 0
दोलखा । सामाजिक सञ्जालमा दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुको चौतर्फी आलोचना भएपछि जिल्लामै अक्सिजन ग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनप्रतिनिधि मात्र...
कोरोना कहर : सेती अस्पतालमा उपचाररत थप ६ जनाको मृत्यु
दीपक ओली - May 15, 2021 0
धनगढी । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थप ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने थप ५५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ...
धनगढीको नेपाली सेनाको अस्पतालमा काेराेना संक्रमितको उपचार गरिने
धनगढी । धनगढीस्थित नेपाली सेनाको फिल्ड अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गरिने भएको छ । सो अस्पताल नेपाली सेनाका परिवारजनलाई मात्रै सेवा दिने गरी...
२ जेठ २०७५ मा फर्किन ओली सहमत
सुभाष साह - May 15, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार राति...
ओली ४२औं प्रधामन्त्री
महेश्वर गौतम/ टेनिस रोका - May 15, 2021 0
काठमाडौं । मुलुकको ४२औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटक पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक देशको कार्यकारी...
‘पहिले मुद्दा फिर्ता त्यसपछि सरकारमा’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अस्वीकार गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै...
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा छलफल शुरु भएको छ । वार्ताका लागि नेता नेपालसहित भीम रावल,...
८ हजार १६७ जना संक्रमित थप, १ सय ८७ को मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार १६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै १८७ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य...
सुनसरीमा सेना परिचालन
विवेक विवश रेग्मी - May 15, 2021 0
इटहरी । सुनसरीमा सेना परिचालन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार मध्यरातिदेखि जेठ १५ गतेसम्म लागू हुनेगरी फलफूल, तरकारी, माछामासु तथा दूध डेरी...
१ सय १९ सिलिन्डर एयर लिफ्टबाट ल्याइयो
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन सक्रियता बढाएको छ ।गृह मन्त्रालयले मोरङ र सुनसरीमा रहेका विभिन्न अक्सिजन प्लान्टबाट...
काठमाडौं । सुनसरी धरानस्थित सुर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन वन तथा...
सर्वोच्चमा ‘भर्चुअल’ बहस पैरवी
निराजन पौडेल - May 15, 2021 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमण ध्यानमा राखेर मुद्दा बहस पैरवी ‘भर्चुुअल’ माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय...
पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण अनि उपाय
डा. केदार कार्की - May 14, 2021 0
पर्यावरण विमर्श नदीहरू पोखरीहरूको पानी एवं भूमिगत पानी त मनिसहरूले प्रदूषित गरेका नै छन् । प्रदूषित गर्न यिनले समुन्द्रको पानी पनि छाडेनन् । समुन्द्र किनारका...
खोपलाई व्यापक बनाउ
पछिल्लो समयमा चीनबाट कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालमा भित्रिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । सहयोगस्वरूप प्राप्त १० लाख डोज चिनियाँ खोप अहिले पनि कोल्डस्टोरमै...
Home प्रदेश प्रदेश ३ काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए १०३८ जना संक्रमित
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए १०३८ जना संक्रमित
तस्वीर : रासस
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा १ हजार ३८ कोरोना सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । जसमध्ये ४०३ जना महिला र ६३५ जना पुरुष रहेका छन् ।
थपिएका सङ्क्रमितमध्ये काठमाडौँमा ८२२, ललितपुरमा १६८ र भक्तपुरमा ४८ जना छन् । उनीहरूको उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो ।
निराजन पौडेल -
एउटै घरका तीन दिदीबहिनी सगरमाथा शिखरमा
काठमाडौं । विश्वको सर्बोच्च छानो सगरमाथा चढेर नयाँ कीर्तिमानी कायम गराउने प्रतिस्पर्धाकाबीच बुधबार दोलखाको एकै घरपरिवारका तीन दिदीबहिनीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । दोलखास्थित...
मानव पुँजी असल स्वास्थ्य
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’ -
दिनदिनैको कोरोना त्रासले आज मानव स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा रहेको छ । सबै व्यक्ति, संस्था, निकायको व्यवस्थापकीय कौशलताले मात्र यस्तो विषम परिवेशबाट निकास दिन सक्छ...
भारतमा २४ घण्टामा चार हजारको मृत्यु, संक्रमण दरमा भने केही सुधार
नयाँ दिल्ली । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतमा केही दिनदेखि संक्रमितको दैनिक मृत्यु संख्यामा कमी आएको छैन । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार...
९३०५ नयाँ संक्रमित, १६८ जनाको कोरोनाले मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा गत २४ घण्टामा ९३०५ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २०,३६२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ९२३८ र ४२४ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा...
सकियो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव
काठमाडौं । अनलाइनमार्फत नै आयोजना गरिएको नेपाल अन्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)को चौथो संस्करण समापन भएको छ । ‘विश्वका कथाको उत्सव’भन्ने नाराका साथ यो महोत्सव...
मोबाइल एप्लिकेसनबाट नक्सासम्बन्धी काम
काठमाडौं । नापी कार्यालय कास्कीले मोबाइल एप्लिकेसनबाट नक्सासम्बन्धी काम सुरु गरेको छ । कार्यालयले तयार गरेको मोबाइल एपबारे तयार गरिएको भिडियो क्लिक गरेर भूमि...
औपचारिक कार्यक्रम नहुने
खेल Kumar Raut - May 21, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघले आज (बिहीबार) भलिबल दिवसको अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना कहरका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेपछि...
प्राधिकरणमा कुलमान दोहोरिने सम्भावना बलियो
Editor-Picks Kumar Raut - September 5, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आगामी चारवर्षे कार्यकालका लागि पुन कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । घिसिङको कार्य कुशलता र पब्लिक...
उच्च सतर्कतालाई नभुलौं
बिचार Kumar Raut - June 12, 2020 0
सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने नीति लिएसँगै सामाजिक दूरी कायमै राख्ने मापदण्डको पालनासहित व्यापार व्यवसाय सुरु भएका छन् । खुद्रा बजार, थोक बजार, मर्मत...
काठमाडौंमा थप २८ जनालाई कोरोना संक्रमण
Breaking News Dhruba Lamsal - July 7, 2020 0
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार थप २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौं जिल्लामा १४, ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा ४ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य...
Breaking News Kumar Raut - January 21, 2021 0
लन्डन । बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकैदिनमा १ हजार ८२० जनाको मृत्यु भएको बेलायतका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बुधबार जानकारी दिएका समाचारमा जनाइएको छ । बुधबार...
भ्रष्टाचारका २ हजार विषय विस्तृत अनुसन्धानमा
प्रदेश ३ Kumar Raut - February 12, 2020 0
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका २ हजार विषय र उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले हाल...
नेपाली भूमिमा गाडिएको अबैध सीमास्तम्भ तोडफोड
Breaking News Sushila Bishwokarma - March 15, 2020 0
महेन्द्रनगर । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको दर्ता जग्गा समेत भारतमा पर्ने गरी सीमा सर्भे टोलीले सीमास्तम्भ राख्न थालेपछि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका र...
पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपात, मुलुकभर बादल
Exclusive Kumar Raut - January 5, 2021 0
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले सोमबारदेखि मुलुकभरको मौसम बदली भई केही स्थानमा वर्षा, हिमपात र बादल लागेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका...
युवतीलाई विदेश पठाउने आश्वासन दिएर होटलमा बन्धक बनाएपछि…
Breaking News Dhruba Lamsal - November 13, 2020 0
पोखरा । बैदेशिक रोजगारीको लागि बिदेश पठाईदिने र बिदेश पठाउनको लागि आवश्यक रकम समेत आफैले उपलव्ध गराईदिने भन्दै २ जना महिलाहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने तीन...
सर्लाहीमा खोलाले बगाउँदा दुईको मृत्यु
प्रदेश २ Kumar Raut - July 23, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीमा बेग्ला बेग्लै स्थानमा खोलाले बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । ईश्वरपुरमा एक युवकको र रामनगर गाउँपालिकामा एक वृद्धको मृत्यु् भएको...
कर्णाली अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, नयाँ बिरामी भर्ना बन्द
कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन विवाद यथावत, मुख्यमन्त्री शाही आफैले राखे पाँच मन्त्रालय
गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नियुक्त
विजय नेपाल - May 12, 2021
ओली नेपाल वार्ता सकारात्मक, सांसदहरुले राजीनामा नदिने
सिलौटाले हानेर श्रीमतीको हत्या
राकेश गुप्ता - May 10, 2021
संक्रमितका लागि तत्काल औषधि र अक्सिजन व्यवस्था गर : सर्वोच्च
राजधानी समाचारदाता - May 12, 2021
चितवन जितविहीन, काठमाडौं शीर्ष स्थानमा
राजधानी समाचारदाता - May 10, 2021
आमालाई ढुंगा हानेको बद्लामा छोराले गरे बञ्चरो प्रहार गरेर बाबुको हत्या
विषादीको नाममा ‘विष’ व्यापार